Fetim-pirenena: hialohavan’ny “Fetin’ny mozika” | NewsMada
Fetim-pirenena: hialohavan’ny “Fetin’ny mozika”
Manitra fety… Tsy misaraka amin’ny fankalazana ny fetim-pirenena rehefa volana jona toa izao ny mozika. Mbola homarihina ihany koa ny “Fetin’ny mozika” mandritra izany.
21 jona, andro iraisam-pirenena hanamarihana ny “Fetin’ny Mozika”. Efa an-taona maro no nankalaza izany koa isika eto Madagasikara. Miditra bebe kokoa anatin’ny fikarakarana ny minisiteran’ny kolontsaina sy ny serasera, amin’ity taona ity, raha ny fanazavana omaly, tetsy amin’ny Tranombokim-pirenena Anosy.
“Singa goavana ao anatin’ny zavakanto sy ny kolontsaina ny mozika. Handray anjara amin’ny fanamarihana ny Fetin’ny Mozika ny minisitera amin’ity, amin’ny alalan’ny sehatra roa. Ny voalohany dia ny lafiny fampahafantarana ny hetsika rehetra izay karakarain’ireo ivokolo toa ny AFT, IKM, No Comment, sns. Hampiarahina ny serasera amin’izany. Ny faharoa kosa dia ny sehatra lehibe hanomezan-danja ny mozika eto amin’ny Tranombokim-pirenena, mandritra ny tontolo andron’io 21 jona io”, hoy ny fanazavan-dRatovonirina Faly, tale misahana ny zavakanto sy ny fampiroboroboana ny kanto eo anivon’ny minisitera.
Fantatra fa hifandimby hanafana ny sehatra amin’izany ry Tsiliva, Rak Roots, Raboussa, Bakidy Gegette, Ben J, Dj Gouty, Francis Turbo ary ireo mpanakanto vao misondrotra. Handeha mivantana amin’ny haino aman-jerim-panjakana ihany koa ny hetsika.
“Lalan-tsaina hitondrana ny fetin’ny mozika ny tontolo andro, hatokana hibahanan’izany mozika izany. Araka izany, ankoatra ireo hetsika voalaza ireo, entanina koa ny olon-drehetra manan-talenta amin’ny mozika mba hivoaka eny an-dalambe eny, hanao mozika sy hizara ny talentany amin’io”, hoy ny fanentanana nataon-dRanarivelo Nampoina, tale misahana ny fifandraisana amin’ny daholobe, eo anivon’ny minisitera.